नेप्से ३००० विन्दुभन्दा माथि, कारोबार रकम पनि ११ अर्ब नाघ्यो | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
नेप्से ३००० विन्दुभन्दा माथि, कारोबार रकम पनि ११ अर्ब नाघ्यो
२०७८ साउन ७, बिहिबार, ८: १२PM
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर ३००० विन्दुभन्दा माथि बन्द भएको छ। नेप्से बढेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि ११ अर्ब नाघेको छ।
अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात मंगलबार ९ अंकको करेक्सन भएको बजार यस दिन करिब १९ अंक बढेको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक १८.७५ अंक बढेर ३००४.३१ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.०६ अंक, फ्लोट इण्डेक्स १.८६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.८८ अंक बढेको छ।
कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ५ उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी ८ उपसमूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ। यस दिन म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ५.२७ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, बैंकिङ्ग उपसमूहको परिसूचक यस दिन १.७२ प्रतिशत र वित्तको १.५२ प्रतिशत बढेको छ। यता व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.०२ प्रतिशत घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन कृषि विकास बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको यस दिन ४६ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यसैगरी, यस दिन एनआईसी एशिया र नेपाल बैंकको ३६ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।
अघिल्लो लेखमाकेपी ओली र माधव नेपालबीच भेटवार्ताको तयारी
अर्को लेखमाएसएसपी सौरभ राणा डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस